मोरङमा व्यापक कालोबजारी । के हेर्दैछन् सि.डि.ओ. ? – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 2315
मोरङमा व्यापक कालोबजारी । के हेर्दैछन् सि.डि.ओ. ?
Janacharcha.com मंगलबार, चैत्र १८, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, चैत १८
लकडाउनको मौकाछोपी मोरङका उद्योगी तथा व्यापारीले खाद्यवस्तुको मुल्य ह्वातै बढाएका छन् । खाद्यान्य उत्पादक र वितरकको मिलेमतोमा खाद्यवस्तुको मुल्य अहिले २५ प्रतिशतसम्मले बद्धि गरिएको छ ।
हाल व्यापारीहरुले लिखित एमएरपीभन्दा बढी मुल्य लिएर ग्राहकलाई खाद्यवस्तु बिक्रि गरिरहेका छन् । उक्त विषयमा ग्राहकहरुले सोद्धा डिलरबाटनै यसपटक सामान महगोमा आएको व्यापारीले बताउने गरेका छन् । त्यस्तै डिलरले उद्योगबाटै खाद्यवस्तु महगोमा आएको बाहान गर्ने गरेका छन् ।
पिठो, चिनि, चामल, दाल लगाएतका दैनिक उपोभोग्य खाघवस्तुको अहिले ह्वातै मुल्य बढेको छ । प्याकेटमा लेखिएको मुल्यभन्दा २५ प्रतिशतसम्म बढी मुल्य लिएर अहिले व्यापारीहरुले समान बच्ने गरेका छन् ।
मोरङको लोकल बजारमा लकडाउनभन्दा अघि ६२ रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइदै गरेको चिनि अहिले ह्वातै बढेर ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै स्वादेशी चामल तथा पिठो उत्पादकहरुले १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा मुल्य विद्धि गरेका छन् । तेल उत्पादकहरुले पनि प्रति कार्टुन १ सय देखि डेढ सयसम्म मुल्य बढाएको बुझिएको छ ।
आर्थिक विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउदै आएका मोरङका पत्रकार शंकर लुईटेलले अहिलेको परिस्थितीलाई टिप्पणी गर्दै जिल्लामा कालोबजारीको पराकाष्ठा नाघेको बताएका छन् । सरकार र प्रशासनको ध्यान कोरोना र लकडाउनमा केन्द्रित भएकाले बजारमा हुने चलखेलको बारे पत्तो नपाएको लुइटेलको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीे केपी ओलीले लकडाउन घोषणा गर्ने क्रममा यस कठिन परिस्थितीमा कालोबाजारी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्लामा बसेका सिडिओ साहेबहरु कालोबजारी बारे बेखवर भईदिदा जिल्लामा कालोबजारी गर्नेहरुलाई आफ्नो गोरखधन्धा चलाउन सजिलो भएको छ ।
कुननः कालोबजारीलाई दण्डित गर्ने अधिकारी पनि सिडिओलाई नै हुन्छ । हाल मदन भुजेल मोरङका सिडिओ छन् । करिब दश दिन अघि ११ हजार थान बढी मास्क र ठुलो मात्रामा सेनिटाइजर लुकाउने विराटनगरको व्यापारी राजेश अग्रावललाई अहिलेसम्म सिडियो भुजेलले दण्डित गरेका छैनन् । लुकाएर राखेको मास्कसहित पक्राउ परेका कालोबजारी अग्रवाललाई पक्राउ परेकै दिन तरिकमा छोडियो । के प्र.म. ओलीले भनेको “कडाभन्दा कडा कारवाही यही हो त ?” यस्तो जटिल परिस्थितीमा कालोबजारी गर्नेलाई प्रशासनले जेल कोच्न सक्नु पर्यो नि !